Tuesday June 18, 2019 - 07:48:07 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xukuumadda dabadhilifka Masar ayaa ku dhawaaqday in aas degdeg ah loo sameynayo Max'med Mursi madaxweynihii hore ee Masar oo xalay ku geeriyooday magaalada Al Qaahira.
Mursi ayaa ahaa siyaasiga kaliya ee katirsan Ururka Ikhwaanka oo madaxweyne ka noqday Masar.
War kasoo baxay xeer ilaalinta guud ee Nidaamka Cabdi Fataax Alsiisi ayaa lagu sheegay in Mursi lagu aasi doono Qabuuro kuyaal duleedka magaalada Al Qaahira waxayna diiday in aaskiisa ay kasoo qeyb galaan siyaasiyiin iyo madax kale oo katirsan Ururka Ikhwaanka.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in qaar kamid ah ehellada Max'med Mursi ay aaska ka qeyb geli doonaan balse waxaa aad loo adkeeyay ammaanka iyadoo laga cabsi qabo in ay dibad baxyo dhigaan taageerayaasha Ururka Ikhwaanul Muslimiin.
Wariyaal katirsan nidaamka Alsiisi ayaa ka digay in lasiyaasadeeyo geerida Mursi oo ay ku tilmaameen in uu katirsanaa Urur Argagaxiso oo ay ula jeedaan Ikhwaanul Muslimiin oo ah Urur laga mamnuucay dalka Masar.
Waxaa jira shaki ah iyo Cabdi fataax Alsiisi uu sun ku dilay Max'med Mursdi oo si lama filaan ah ugu dhax dhintay hoolka maxkamadda weyn ee Qaahira.